सडक निर्माणमा चरम लापरवाही, हातले उप्कने कालोपत्रे — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पूर्वाधार > सडक निर्माणमा चरम लापरवाही, हातले उप्कने कालोपत्रे
उनका अनुसार सडक कालोपत्रे गर्दा ‘रिसोलिङ पिच’ गर्नुपर्ने ठाउँमा गिट्टी नराख्ने गरेको र मात्राअनुसार अलकत्रा प्रयोग नगरी सडक कालोपत्रे भइरहेको छ ।
सडक मर्मतका बेला सडकलाई फराकिलो गरेर कालोपत्रे गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको पाइएको हो । यता कालोपत्रेको काममा गल्ती भएकोे निर्माण कम्पनिका प्रतिनिधि हरिप्रसाद खनाल स्वीकार गरेका छन् ।
ओटासिल सडक उप्कीसकेकाले सो मर्मतका लागि करिब ६ करोडमा कम्पनीसँग सम्झौता भएको भए पनि निर्माण कम्पनीले सडकको छेउमा जाली नहाल्ने तथा किनारामा नाला नबनाएर नै सडक मर्मत गरिरहेको पाइएको छ ।
सडक निर्माणमा भइरहेको कमसल सामान परिवर्तन गरी गुणस्तरीय सामान प्रयोग नगरेमा युवाले कामलाई अवरोध पु¥याउने बताएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीले जलजला निर्माण सेवा काठमाडौंलाई सो सडक कालोपत्रे गर्ने कामको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
२०७७ माघ ९ गते ११:३७ मा प्रकाशित
विमानस्थलमा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा पाँच जनाको मृत्यु,आठ घाईते !
महरासम्बन्धी मुद्दाको सकियो थुनछेक बहस, के आउला आदेश ?
देशभर निषेधाज्ञा हटाउँदै : असोज १ पछि के खुल्ने ? के बन्द हुने ? मन्त्रिपरिषद्ले गर्दैछ यस्तो निर्णय
हेर्नुहोस्, यस्तो छ यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति (पूर्णपाठसहित)